Helikoptera any India: Tsara kokoa amin'ny fotodrafitrasa sy ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Helikoptera any India: Tsara kokoa amin'ny fotodrafitrasa sy ny fizahantany
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Helikoptera any India
Politika Helikoptera 10 teboka vaovao, "Helicopter Accelerator Cell", nambara ary natsangan'ny Ministeran'ny fiaramanidina sivily ao India.
Ny helikoptera dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny toekarena ary ampahany manan-danja amin'ny tontolo iainana sivily fiaramanidina.
Ny lalantsaran'ny helikoptera dia hatsangana amin'ny tanàna 10 misy zotra 82, natokana 6, hanombohana.
Helipads dia hapetraka amin'ny làlambe mba hanampiana ny famoahana ireo niharan-doza tamin'ny alàlan'ny làlambe telo voamarina.
Andriamatoa Jyotiraditya Scindia, minisitry ny fiaramanidina sivily, dia nilaza androany fa tsy vaovao ny hevitra momba ny angidimby fa any India, saingy mila ampitomboina miaraka amina rafitra ahafahan'ny indostria miasa miaraka amin'ny governemanta hanompo ny olona. Mila atao laharam-pahamehana ny fidiran'ny helikoptera ao amin'ny firenena, hoy izy. Nanampy izy fa mila omena toerana iray ahafahan'ny mpandraharaha manao ny asa aman-draharahany amin'ny maha-firenena marina azy, ary ny eritreritra dia tsy maintsy arahin'asa.
Niresaka tamin'ny Fihaonambe Helikoptera FICCI faha-3 tamin'ny 2021, “[email voaaro]: Fanafainganana ny fitomboan'ny indostrian'ny helikoptera indianina ary ny fampiroboroboana ny fifandraisana amin'ny rivotra, ”Hoy Andriamatoa Scindia nanambara ny Politikan'ny helikoptera 10 dingana vaovao. Tamin'ny famelabelarana ny politika, Andriamatoa Scindia dia nanamarika fa ny sela Helicopter Accelerator dia natokana ho an'ny Minisiteran'ny fiaramanidina sivily izay hijery ny olan'ny indostria ao amin'ity sehatra ity.
Ankoatr'izay dia nanambara ny Minisitra fa ao anatin'ity politika ity dia hofoanana daholo ny saram-pitoriana ary haverina amin'ny laoniny ny fametrahana ny parking. “Ho loharanom-pahalalana azonao ampiasaina ianao hanamorana ny fitomboanao. Ny dingana fahatelo amin'ny politika dia hiantohana ireo mpiasan'ny AAI sy ATC manantona ny indostria hahafahanay manome antoka fa omena fiofanana sahaza ny olona rehetra momba ny olan'ny angidimby, ”hoy izy.
Mba hanamorana ny asa aman-draharaha dia nampahafantatra ny minisitra fa nisy vondrona mpanolo-tsaina napetraka tamin'ny angidimby. “Ny teboka fanaintainan'ny indostria dia horesahina amin'ny [sekretera] na amin'ny ambaratonga misy ahy. Hotsinjovana ny olan'ny lalàna sy lalàna lany andro », hoy izy.
Nanampy Andriamatoa Scindia fa 4 Heli Hubs sy Units Training dia hatsangana ao Mumbai, Guwahati, Delhi, ary Bangalore. Nilaza ihany koa izy fa hiorina amin'ny tanàna 10 misy zotra 82 ny Helicopter Corridors. Hanomboka asa amin'ny làlam-pitokanana 6 natokana hanombohana azy ny Minisitera. Ny làlana lehibe fantatra dia ny Juhu-Pune, Pune- Juhu, Mahalaxmi Racecourse - Pune, Pune - Mahalaxmi Racecourse, Gandhinagar - Ahmedabad, ary Ahmedabad - Gandhinagar.
Nilaza koa Andriamatoa Scindia fa hatsangana miaraka amin'ny làlambe voatondro ireo Helipads mba hahafahana miala eo noho eo ireo tra-doza. "Ny làlambe Delhi-Bombay, làlambe Ambala-Kotputli, ary Amritsar - Bathinda - Jamnagar Expressway dia ho anisan'ny HEMS (Serivisy vonjy maika helikoptera)," hoy ny Minisitra nanampy.
Heli-Disha, ilay bokikely momba ny fitaovana fitarihana fitantanana helikoptera sivily, izay navoaka tamin'ny hetsika, dia homena ny mpanangona isaky ny distrika ao amin'ny firenena, hoy ny nambaran'ny minisitra. Izany dia hiantohana ny famoronana fahatsiarovan-tena ao amin'ny fitantanan-draharahan'ny distrika, hoy ihany izy.
Notokanana tamin'io hetsika io koa ny vavahadin-tserasera Heli Seva afovoany ho ampahany amin'ny Politikan'ny helikoptera vaovao. Navoaka tamin'ity hetsika ity ihany koa ny sarintany momba ny serivisy ho an'ny fitsaboana maika (HEMS).
Ny jeneraly (Dr.) VK Singh (Retd.), Ny minisitry ny fanjakana, ny minisiteran'ny fiaramanidina sivily ary ny minisitry ny fanjakana, ny minisiteran'ny làlambe, ny fitaterana sy ny làlambe, governemanta India dia nilaza fa manana angovo manokana ny angidimby. Ny fikolokoloana sy ny fikojakojana azy ireo anefa dia lafo ary noho izany dia tsy nampiasaina firy tamin'ny fivezivezena mpandeha. “Manantena izahay fa ho afaka hampihena ny vidiny ary hanao izay hahavelomany ara-toekarena. Sehatra iray mila famporisihana ity ary mila fandehanana lehibe kokoa amin'ny lafiny azo ampiasaina, "hoy ihany izy.
Andriamatoa Pushkar Singh Dhami, Lehiben'ny minisitry ny governemanta Uttarakhand, dia nilaza fa i Uttarakhand dia miankina amin'ny fizahan-tany ho an'ny toekareny, izay mila fifandraisana tsara indrindra. "Izahay dia mijery helikoptera hampifandray olona Manandrana manao helikoptera ho an'ny olon-tsotra izahay ary mikendry ny hanome serivisy tsara indrindra raha ny momba ny angidimby," hoy izy.
Andriamatoa Satpal Singh Mahara, minisitry ny fizahan-tany, fanondrahana, kolontsaina ary ny filoham-pirenena, Uttarakhand Board Development Board, dia nilaza fa amin'ny ezaka hanamafisana ny fifandraisana, dia manao ezaka ny seranan-tsambo hidina amin'ny Nanak Sagar. “Ity dia hanampy amin'ny fananganana fifandraisana. Ny fanjakana dia mikendry ny ho mpanome tolotra. "Mangataka ihany koa izahay hananganana seranam-piaramanidina iraisampirenena ao Haridwar," hoy izy.
Ramatoa Usha Padhee, sekretera iraisan'ny Minisiteran'ny fiaramanidina sivily, ny governemanta India, Helikoptera, dia nanisy lisitra ny isan'ny fandraisana andraikitra nataon'ny Ministeran'ny fiaramanidina sivily. "Ny Helicopter Accelerator Cell dia hanome sehatra ho an'ireo mpiara-miombon'antoka rehetra hiasa miaraka amin'ny governemanta. Raha niresaka momba an'i Heli Sewa, Ramatoa Padhee dia nilaza fa ho mpamadika lalao ity tranonkala ity satria tsy mitsahatra mampiasa azy io sy manankarena ny atiny. "Miorina amin'ny fangatahan'ny mpandraharaha ity tranokala ity ary antenaina fa hitranga haingana ny fanesorana ireo angidimby," hoy izy nanampy.
Andriamatoa Dilip Jawalkar, CEO, Uttarakhand Tourism Development Board, dia nilaza fa ny anjara asan'ny angidimby dia tena zava-dehibe indrindra amin'ny faritra lavitra sy be havoana toa an'i Uttarakhand. Ny taxi-be Heli dia manampy refy fampidirana, indrindra ho an'ireo zokiolona, ​​ankizy ary ireo tsy mitovy asa. Ny helikoptera dia manome ny fomba fifandraisana haingana indrindra amin'ireo faritra lavitra sy tsy azo aleha ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fitantanana ny loza voajanahary sy ny asa famonjena any amin'ny fanjakana.
Andriamatoa Sanjeev Kumar, Filohan'ny Lehiben'ny Seranam-piaramanidina ao India dia nilaza fa ny angidimby dia manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny toekarena ary ampahany lehibe amin'ny fiaramanidina sivily tontolo iainana.
Dr. RK Tyagi, Chair, FICCI General Aviation Taskforce, ary ny filoha teo aloha, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), ary Pawan Hans Helicopters Limited (PHHL), dia nilaza fa manana herin'ny helikoptera 236 i India ankehitriny izay mizara ho mpandraharaha 73. “Indostria tena mizarazara ity misy mpandraharaha 3 monja manana angidimby 10 mahery. India dia tsy maintsy manana angidimby maherin'ny 5,000 miaraka amin'ny maro amin'izy ireo natokana ho an'ny serivisy fitsaboana vonjy maika, ary ny lalàna sy ny filaminana, "hoy izy.
Andriamatoa Remi Maillard, filoha, komity fiaramanidina sivily FICCI, ary filoham-pirenena ary MD, Airbus India, dia nilaza fa ny topografia sy ny fielezan'ny mponina any India no mahatonga azy io ho firenena angidimby. “Ny helikoptera dia ampahany mivoatra tsara amin'ny toekarena maro eto an-tany, nefa ny tsenan'ny angidimby dia tena mihena any India. Ny helikoptera dia mbola raisina ho toy ny kilalao mahafinaritra an'ny mpanankarena. Ny governemanta sy ny indostria dia mila manova ny fomba fijerin'ny angidimby (helikoptera) - hamongorana ireo angidimby ho amin'ny toerana azo ekena kokoa, "hoy izy.
Andriamatoa Dilip Chenoy, sekretera jeneraly, FICCI, dia nilaza fa ny indostrian'ny fiaramanidina sivily ao India dia nanjary iray amin'ireo indostria mitombo haingana indrindra ao amin'ny firenena. "Ny helikoptera dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny toekarena, ary ny lanjan'ny angidimby dia miampy roa noho ny toetran'ny asa-tanana amin'ny asa tanana ary koa ny fitaovam-pitantanana ambany fifehezana ny rivotra", hoy ihany izy.